Maung Pu (1859 - 1916) - Genealogy
(11) H.M. King Thibaw Min
‹ Back to Pu surname
Is your surname Pu?
Research the Pu family
(11) H.M. King Thibaw Min's Geni Profile
Records for Maung Pu
Birthdate: January 1, 1859 (57)
Death: December 15, 1916 (57)
Son of (10) H.M. King Mindon Min and Laungshe Myosa Mibura
Managed by: Thant Ko Ko Maung
(10) H.M. King Mindon Min
Laungshe Myosa Mibura
About (11) H.M. King Thibaw Min
1878 - 1885 H.M. Athet-u-san-paing-than-ashin Hpondawgyi Hla-thaw Hpaya Shwe Nanshin Hpaya Hsinbyushin Sri Pawara Aditya Lanka Vijaya Nandaratta Tilaka Adipati Pandita Maha Dharma Rajadhiraja [Thiri Pawara Ditya Lanka Wizara Nanda Yatha Tilawkadhipati Pandita Maha Dhamma Razadhiraza] [Thibaw Min Thaya Gyi], King of Burma. b. at the Royal Palace, Ratnapura, Mandalay, 1st January 1859, as Maung Pu, forty-first son of H.M. Sri Pawara Vijaya Nandaratta Pandita Maha Dharma Rajadhiraja Mindon Min Thaya Gyi, King of Burma, by his wife, H.M. Queen Sri Maha Mangala Suriya Prabha Devi, Laungshe Myosa Mibura, daughter of General H.R.H. Prince Maung Mey, Sri Suriya Maha Dharmaraja, Prince of Thibaw, Governor-General of the Shan States, educ. SPG Royal Sch., Mandalay. Granted Thibaw in fief and raised to the title of Suriya Sri Dharmaraja in his youth. Appointed as Heir Apparent with the titles of Maha Uparaja Anaudrapa Ainshe Min and Sri Pawara Maha Suriya Dharmaraja, 19th September 1878. Succeeded on the death of his father, 1st October 1878. Crowned at the Royal Palace, Ratnapura, Mandalay, 6th November 1878 and again 23rd May 1880. Declared war against Great Britain, 7th November 1885. Defeated, captured and deposed, 29th November 1885. Exiled to India 10th December 1885, thenceforth styled His Highness the Ex-King Thibaw.
He d. at Ratnagiri, Bombay, India, 15th December 1916 (bur. there), having had issue, two sons and six daughters.
သီပေါမင်း (၁၈၇၈-၁၈၈၅) သည် ကုန်းဘောင် မင်းဆက်၏ နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာဘုရင်စနစ်၏ နောက်ဆုံးမင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ဘွဲ့တော်မှာ သိရီပ၀ရ ၀ိဇယာနန္တ ယသတိလောကာ ဓိပတိ ပဏ္ဍိတ မဟာဓမ္မရာဇာဓိရာဇာ ဖြစ်ပြီး နန်းသက် ခုနှစ်နှစ်ဖြစ်သည်။
မင်းတုန်းမင်း နှင့် လောင်းရှည် မိဖုရားတို့၏ သားတော်ဖြစ်ပြီး နံတော် စနေသား၊ ငယ်မည် မောင်ရေစက် ဖြစ်လေသည်။ ငယ်စဉ်အခါက ဘာသာရေးနှင့် စာပေအရာ၌ ထူးချွန်သူ ဖြစ်သည်။ ထီးနန်းဆက်ခံရန် အလားအလာ အလွန်နည်းသော်လည်း မိဖုရားခေါင်ကြီး ဆင်ဖြူမရှင်၏ သမီးတော် စုဖုရားလတ်နှင့် ရည်ငံနေခြင်းကြောင့်၎င်း၊ စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်ကို အသက်သွင်းလိုသည့် ကင်းဝန်မင်းကြီး ဦးကောင်းက ၄င်း၏ ပျော့ပျောင်းမှုကို လိုလားသည်ကြောင့်၎င်း အခြား မင်းညီမင်းသားများကို ကျော်ဖြတ်ကာ ထီးနန်း ဆက်ခံခွင့် ရခဲ့သည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး ရတနာပုံ နေပြည်တော် သို့ အင်္ဂလိပ်တို့ ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် မိဖုရားခေါင်ကြီး စုဖုရားလတ်နှင့် အတူ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ရတနာဂီရိ သို့ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
(11) H.M. King Thibaw Min's Timeline
Birth of Maung
Death of Maung